I-Redmi S3: uyilo lwefowuni entsha yeXiaomi eqinisekisiweyo | I-Androidsis
UXiaomi uqinisekisa uyilo lweRedmi S3 kwividiyo
Kubonakala ngathi iRedmi iqhuba kakuhle kuba yahlule ngeendlela Xiaomi. Ngelixa kuyinyani ukuba izolo sifunde iindaba ezimbi ukusukela, ezinye iimodeli zenkampani yaseAsia aziyi kufumana i-Android 9 Pie, umenzi uyaqhubeka nokusebenza ukubonelela ngokugqibeleleyo ngamaxabiso enkqonkqozo. Kwaye namhlanje, sinokuqinisekisa uyilo olutsha I-Redmi S3.
Lumka, kolu hlaselo asithethi ngokuvuza, kodwa ibiyinkampani ngokwayo epapashe ividiyo ngeakhawunti yayo esemthethweni yeTwitter eIndiya, ebonisa zonke iinkcukacha zoyilo lwale Redmi S3. Makhe sibone ukuba ifowuni elindelweyo ijongeka kanjani.
Olu iya kuba luyilo lweRedmi S3, enesifundi seminwe ngasemva kunye nenkqubo yekhamera emibini
Njengoko besitshilo, kuyo Akhawunti ye Twitter Ungabona ividiyo apho sinokubona ukuba iRedmi S3 iya kujongeka kanjani. Kwaye sele uvile ngale modeli ngaphambili, nangona yayisaziwa ngcono NjengoRedmi Y3, Iya kuba ligama eliya kuba nalo kwimarike yaseAsia. Kwaye, njengoko kwenzekile kwimodeli yangaphambili, entsha ifowuni enexabiso eliphantsi evela eRedmi.
Ngevidiyo, sinokubona ukuba kukho inani lotshintsho oluphawuleka ngokuthelekiswa nengaphambili. Ukuqala, sifumana uyilo olungenamda, siyabulela ngokuyinotshi ekubunjweni kwethontsi lamanzi elingaphezulu ukophula i-aesthetics yescreen kancinci. Kwakhona kubonakala ngathi sinotshintsho kwindawo yekhamera yangemva, enika ukukhanya kwe-LED ezantsi, endaweni embindini.
Ngokubhekisele kwiimpawu ezinokubakho zale Redmi S3, kulindelwe ukuba ime ngaphandle ngokuba nekhamera yangaphambili yokubonelela ngee-selfies ezinomdla ngokwenene ngenxa yesisombululo se-megapixel engama-32 esiya kuba nayo. Ukongeza, iya kuba neprosesa yeQualcomm Snapdragon 710 kunye ne-4 GB ye-RAM kunye ne-mammoth 4.000 mAh ibhetri ethi, ukongeza ekubeni ngaphezulu kokulingeneyo ukuxhasa bonke ubunzima behardware, iya kubonelela ngokuzimela okupheleleyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » UXiaomi uqinisekisa uyilo lweRedmi S3 kwividiyo
Kutyhilwe uluhlu lweefowuni eziza kuhlaziya kwi-EMUI 9.1